सिंहदरबार छिरेपछि बाबुरामको विवेकमा सतीको श्राप परेछ :: डा. सुन्दरमणि दीक्षित (नागरिक समाजका अगुवा) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०९:१२ English
० राजनीतिक सहमतिको अभावमा राजनीतिक अवस्था गञ्जागोल भएको बेला नागरिक समाज पनि सडकमा उत्रिएको अवस्था छ, तपाईंहरु किन यसरी सडकमा आउनु परयो ?
– हामी त सधैं सडकमै त छौँ । मैले त आजकल यो भन्ने गरेको छु कि जो जंगलमा थिए ती आज महलमा पुगे, जो महलमा थिए अहिले जंगलमा पस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हामी नागरिक समाज त सधैं सडकको सडकमै छौँ । किनकि, हामी जनता र राष्ट्रको मात्र हित चिताएर आफ्ना आवाज उठाइरहेका हुन्छौँ । यतिबेला राष्ट्र र जनताका हितका कुरा नै फेरि ओझेलिन थालेको छ । कानूनी व्यवस्था छैन, शान्तिसुरक्षा कता गयो कता, महंगी त्यत्तिकै उकासिएको छ, अभाव त्यत्तिकै, बत्ती छैन, यस्तो अवस्थामा हामी पनि चुप बसे कसरले मुलुकको लागि आवाज उठाइदेला ? त्यसैले हामी सडकमा उत्रिनु परेको हो ।
० तपाईंले उठाएका मुद्दा त सही छन्, तर सडकमा त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बिरोध पो बढी सुनिएको छ त ?
– यी मुद्दा हल हुनुपरयो भनेर आवाज उठाउँदा त स्वतः बाबुराम भट्टराईको बिरोध हुन्छ र हुनुपर्छ नि ! देश बर्बादीको ज्वालामा धपधपी बलिरहँदा पनि कोही चुप बस्न सक्छ र ? यतिबेला बाबुराम भट्टराईको बिरोध नगर्नु भनेको त देश र जनताप्रति असम्वेदनशील बन्नु ठहरिन्छ । कुनै पनि सचेत तथा देश र जनतालाई माया गर्ने व्यक्ति यस्ता निकम्मा प्रधानमन्त्रीको विरोध नगरीरहन सक्दैन । ४५ दिनभित्र सबै राजनीतिक समस्या किनारा लगाउन नसके एकदिन पनि बढी कुर्सीमा बस्दिनँ भनेको व्यक्ति दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि समस्या बल्झाएर यसरी कुर्सीमा टाँसिइरहन सुहाउँछ ? चुनावको मिति तोके तर त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनन्, अर्को मिति तोके त्यो पनि लछारपाटो लगाउन सकेनन् । शान्तिसुरक्षाको यो अवस्था छ भने कुन नाक–मुखले उनी अहिले प्रधानमन्त्री भएर बस्ने ?
० प्रधानमन्त्रीले त आफूलेजत्तिको राम्रो काम ०६३ यताका प्रधानमन्त्री कसैले गर्न सकेका थिएनन् भनी दाबी गर्नेगरेका छन् नि त ?
– प्रधानमन्त्रीका रुपमा त होइन बाबुराम भट्टराईले बिद्रोही नेताबाट तात्तात्तै आएर अर्थमन्त्री हुँदाचाहिँ राम्रो काम गरेकै हुन्, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्न खोजे पूर्वाग्रही ठहरिन्छौँ । उनले त्यतिबेला दिएकोजस्तो राम्रो बजेट आजसम्म कसैले दिएका थिएनन् भन्न चाहन्छु म त । जनयुद्धको भावना, जनआन्दोलनको मर्म बुझेर देशहितमा गरेको काम थियो त्यो भन्दा फरक पर्दैन । तर, काठमाडौंभित्र पसेर बिस्तारै–बिस्तारै यहाँको जब यिनले पावर चाखे, जब–जब उनीभित्र महत्वाकाङ्क्षा जाग्न थाल्यो कि उनी पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, जब पालुङटार घटना भयो, लगत्तै जब धोबिघाट घटना हुँदै फुत्त जब उनी प्रधानमन्त्री बने, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई बिग्रिँदै–बिग्रिँदै गए र अहिले त खिया परेको पत्रु समान उनी बन्न पुगेका छन् ।
० त्यसोभए तपाईंको दृष्टिमा बाबुराम नेतृत्वको सरकार असफल सरकार हो, होइन त ?
– असफल मात्र होइन यो त सरकार नै होइन भन्छु म । यस्तो अपूर्ण र असंवैधानिक सरकारलाई किन सरकारको मान्यता दिनु ? उनी संविधानसभाबाटै चुनिएर आएको भनी दम्भ गर्ने गर्छन्, तर संविधानसभाले त पूर्ण सरकार मागेको हो, आजको अपरिहार्यता त पूर्ण र सर्वसहमतिको सरकार हो । आजसम्म यो सरकारले पूर्ण या राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिन सकेको छैन । त्यसैले यो असफल मात्र होइन सरकारको रुप नै नभएको एउटा मुर्खुट्टो अवस्थाको जनतालाई तर्साउने तत्व मात्र हो ।
० यस्तो सरकारलाई कसरी हटाउनुहुन्छ त तपाईंहरु ?
– हामीले त ‘हट’ भन्ने न हो, समातेर गोद्न मिलेन ! हाम्रो काम त यो–यो कमी–कमजोरी भयो, यो दोष देखियो भनेर औँल्याउने र दबाव दिने हो । हामी कुनै डन होइनौँ, माफिया होइनौँ, हामीसँग कुनै विदेशी शक्ति पनि छैन, पुलिस र आर्मी हामीसँग छैन । हामीले त लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार चल भनेर आवाज उठाउने हो, दबाव दिने हो । लोकतन्त्रमा लोक (पब्लिक)को सुन्नुपर्छ भन्ने आफूलाई विद्वान भन्न रुचाउने बाबुरामलाई थाहा छैन होला त ? यिनी त एकदम ढोँगी व्यक्ति पो रहेछन् । कतै बाबुराम भट्टराई र उनलाई साथ दिने मधेसी दलहरुले लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउन लागेका त होइनन् भन्ने आशंका पो जन्मिन थालेको छ यतिबेला त ।
० बाबुराम भट्टराईले यसरी पदप्रति मोह किन दर्शाउनुभएको होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
– पदमा पुग्नेवित्तिकै मानिसको दिमाग नै खुस्काइदिने भाइरस प¥यो उनलाई पनि ! सतीको श्राप परेको देश हो, त्यही श्रापको उपज भन्नुपर्ला अब । नत्र अर्थमन्त्री हुँदासम्म त्यति राम्रो काम गरेका, जनयुद्ध र जनताको मर्म पक्रेर अघि बढेका व्यक्ति अहिले यस्तो लिच्चड किन बन्थे र ? यसरी पदमा टाँस्सिएर बस्न मन लाग्नुमा उनको पार्टीको पोजिशनले पनि काम ग¥यो जस्तो लाग्छ । किनकि, पार्टीभित्र उनको खास पकड र शक्ति छैन । जनताबाट त पूरै उनी अलग्गिई सके । यसले गर्दा कसरी पार्टीमा पकड बनाउने भन्ने धून उनमा सवार छ र सत्ता र पैसालाई यसका लागि हतियार बनाउने प्रयास सायद उनी गर्दैछन् । यहाँसम्म पनि मलाई लाग्छ कि पार्टीमा प्रचण्डलाई कमजोर बनाउँदै उनलाई फ्याँक्नै पो सकिन्छ कि भन्ने भयङ्कर खतर्नाक मनोकाङ्क्षा बाबुरामले पाल्न थालिसकेका छन् । विदेशी शक्तिको आड र आर्मी–पुलिसलाई फकाउने उनको गिरेको चालमालका आधारमा यस्तै लाग्छ मलाई । उनी एमाओवादी पार्टी नै हत्याउने दाउमा लागेकाले पनि सत्तालिप्सा यस्तरी बढेको हो उनमा ।
० मोहन वैद्यले ‘बाबुराम त छिमेकी भारतका एक इमानदार ठेकेदार हुन्’ भन्नेसम्मको आरोप लगाएका छन्, यस्तो के भनेको होला ?
– वैद्यजीले धेरै नजिकबाट बाबुरामजीलाई बुझेका छन्, त्यसैले उनले दिएको अभिव्यक्तिप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । मलाई पनि यसमा शङ्का लागिरहेको छ । किनकि, जब उनी भारत भ्रमणमा गएका थिए, त्यतिबेला जसरी उनको स्वागत गरिएको थियो त्यो धेरै बेइज्जतीपूर्ण थियो । डेपुटी चिफ अफ प्रोटोकल आएर उनलाई स्वागत गरेको थियो । त्यस्तो पनि बाबुरामले आरामसाथ सहेका थिए । यस्तो त दलालले मात्र सहन्छ, अरुले सक्दैन । अर्को कुरा उनलाई विप्पा सम्झौता नगर्नु है भनेर सबैले आवाज उठाएका थिए, उनका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत दिल्लीमा फोन गरेर ‘तपाईंले विप्पा सम्झौता गर्न लागेको भन्ने सुन्छु, त्यो नगर्नु है’ भनेका थिए, तर उनले ठाडै लत्याइदिए । यति मात्र होइन अन्य संवेदनशील विषयमा समेत उनले गोप्य सम्झौताहरु गरेर आएछन् । यो सबै हेर्दा त मुलुकभित्र समर्थन र पार्टीमा पकड नभएर विदेशीको सहयोग र समर्थन लिन गरेको भन्ने बुझिँदैन र ?
० कुनैबेला तपाईं र तपाईंहरुसहितको नागरिक समाजले नै बाबुराम भट्टराई नै यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर चर्को आवाज गर्नुहुन्थ्यो, आज यसरी बिरो ध गर्नुपर्ने दिन पनि आउँदोरहेछ होकि ?
– मैले तपाईंलाई भनेँ नि अर्थमन्त्री हुँदासम्मका बाबुराम भट्टराई र आजका बाबुाममा आकास–जमिनको अन्तर प¥यो भनेर । मानिसको मन यसरी पनि ट्वीस्ट हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन । हामीले त देश, काल परिस्थिति र तत्कालको कार्यशैली हेरेर त्यसो भनेका थियौँ । उनको एकेडमिक रेकर्ड, जनयुद्धको उनको चाल, त्यसपछि शान्तिसम्झौतामा उनले खेलेको भूमिका आदि हेर्दा उनी त्यागी पनि हुन् बुद्धिमान पनि छन्, उनी कानूनी राज्य मान्छन्, लोकतन्त्रमा उनी विश्वास गर्छन् भनेर पो मानेका थियौँ त । यसरी बिग्रेलान् भन्ने कतै रत्तिभर ठानेनौँ नि हामीले । पद, पैसा, पावर र सम्भवतः विदेशीको मद्दतले पनि हुनसक्छ, हामीले सोचेका विवेकी बाबुरामको विवेक, इमानदारी, त्याग, नैतिकता सबै हावाले उडाएर लगेछ ।
६ माघ २०६९, शनिबार १२:२६ मा प्रकाशित